आईफोन, एप्पल द्वारा निर्मित - 2007 मा पहिलो मोबाइल कम्प्युटर देखियो। तीन वर्ष पछि, प्रमुख निर्माता (सैमसंग र एप्पल) लगभग एकै समयमा संसारको सुसज्जित संग आफ्नै परिचालन प्रणाली ट्याब्लेटको पहिलो नमूनाहरू देखाए। त्यो समय देखि, मिनी कम्प्युटर बिस्तारै व्यापक मांग र लोकप्रियता प्रयोग गरेर प्रयोग आउन थाले।
हाल, ट्याब्लेट सबैभन्दा खोजे-पछि इलेक्ट्रनिक्स स्टोर मा किनमेल को एक भएको छ। उपभोक्ताहरु अघि विभिन्न आकार र ब्रान्डहरु को मिनी कम्प्युटर को एक विशाल श्रेणी प्रस्तुत। सही विकल्प त छैन सस्तो किनमेल गर्न, तपाईंले यस उपकरणबाट आशा के जान्नु आवश्यक छ।
आधुनिक ट्याब्लेट outgrown गेमिङ ग्याजेट मात्र मनोरञ्जन लागि डिजाइन। नवीनतम कार्य को एक किसिम प्रदर्शन सक्षम मिनी-कम्प्युटर, तिनीहरूले ठूलो मात्रा स्थिर समकक्षों आफ्नो धेरै भिन्न छन्। र अझै कसरी ट्याब्लेट चयन गर्न? जो राम्रो छ? यो मुद्दा मा उपभोक्ता समीक्षा एकदम भिन्न छन्।
यस्तो मिनी-कम्प्युटर मुख्य लाभ - यो compactness र बहुमुखी प्रतिभा छ। यो तपाईं संग लिन र सफलतापूर्वक सबै सामान्य आवेदन, जटिल पेशेवर कार्यक्रम भिडियो खेल बाट आनन्द उठाउन सक्छौं।
ट्याब्लेट राम्रो छ? समीक्षा
ट्याब्लेट भन्दा राम्रो छ के को प्रश्नको जवाफ अघि, तपाईं आधुनिक हाते कम्प्युटर को निर्माण संलग्न आधारभूत निर्माण कम्पनीहरु सिक्नुपर्छ।
प्रसिद्ध Apad एप्पल गरेको प्रतिद्वन्द्वी को पहिलो को उपस्थिति देखि vigilantly उपभोक्ता बजार प्रस्तुत गर्न खोज्नु एक, नयाँ र बढी उन्नत र ट्याब्लेट मोडेल संग सुसज्जित।
मुख्य प्रतिस्पर्धा ब्रान्डहरु अब "Eypl" र "सैमसंग" छन्। ट्याब्लेट एक कम्पनी किन्न राम्रो छ? यी कम्पनीहरु नियमित नयाँ प्रविधिहरू र कम्प्युटर अग्रिम को क्षेत्र मा ताजा विचार संग ग्राहकहरु प्रसन्न हुन्छु। आजकल, यो यी दुई कम्पनीहरु को जो पहिलो नवीन प्राविधिक समाधान आविष्कार बुझ्न पहिले नै असम्भव छ। कम्पनीहरु नियमित hurriedly आफ्नो मोडेल तिनीहरूलाई लागू गर्न प्रयास, प्रत्येक अन्य गरेको वैज्ञानिक विचार सिक्न।
सबैभन्दा लोकप्रिय ट्याब्लेटको को अवलोकन
सबैभन्दा लोकप्रिय ट्याब्लेट मोडेल क्षणमा जानिन्छ के हुन्? तिनीहरूलाई केही विचार र तुलनात्मक विशेषताहरु दिन आवश्यक छ।
गोली "ग्यालेक्सी" कम्पनी "सैमसंग"। त्यहाँ ग्यालेक्सी विभिन्न प्रकारका छन्। यो मोडेल ट्याब 3,4एट अल।, यस्तै विशेषताहरु पाएपछि।
एउटै कम्पनी बाट लेनोभो ट्याब्लेट। प्रयोग गर्न विश्वव्यापी कलम-अडान, सुविधाजनक - यो मोडेल को मुख्य लाभ।
गोली Explay - यो सबैभन्दा कम अन्त, तर लायक देखेर विकल्प छ।
माथिको मोडेल को सबै आधुनिक र प्रयोगकर्ता-अनुकूल सञ्चालन प्रणाली "एन्ड्रोइड", एक शक्तिशाली प्रोसेसर, बल्क राम संग सुसज्जित छन्। यी अद्भुत ट्याब्लेटको पक्कै यसको प्रयोगकर्ता खुसी हुनेछ।
आधुनिक ट्याब्लेट विशेषताहरु
ट्याब्लेट समान मोडेल भन्दा धेरै लाभ गर्दै छन्:
संकुचित तर सानो छैन आकार;
ट्याक्टायल नियन्त्रण संभावना;
वर्ल्ड वाइड वेब पहुँच;
के नियम ट्याब्लेट खरीद शासन गर्नुपर्छ? यहाँ यो सिस्टम सफ्टवेयर को सबै घटक को गुण र विशेषताहरु विश्लेषण गर्न आवश्यक छ:
USB र फ्लैश मेमोरी कार्ड लागि निर्मित स्लट।
अब कम्प्युटर प्रणाली, काम प्लेट गुणस्तर लागि जिम्मेवार छ, जो प्रत्येक घटक को एक विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार।
जब ट्याब्लेट छनौट तीन प्रमुख सञ्चालन प्रणाली जो सबै भन्दा आधुनिक मिनी-कम्प्युटर आधारमा सञ्चालन थाहा आवश्यक - यो एन्ड्रोइड, आइओएस र विन्डोज छ।
सबै भन्दा साधारण र लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड छ। यो Google बाट Android बजार मार्फत डाउनलोड मार्फत खरिद गर्न सकिन्छ भनेर (अर्को शब्दमा, आवेदन मा) आवश्यक आवेदन धेरै सुविधाजनक छ। रूपमा प्रयोगकर्ताहरूलाई छाँटकाँट सकेसम्म धेरै प्रणाली को लचीलेपन।
आइओएस मानिन्छ संसारभरि कुनै कम लोकप्रिय। यो उपयुक्त आवेदन को एक किसिम संग सुसज्जित छ। यस प्रणालीको मुख्य drawback - कार्यक्रम डाउनलोड गर्न सकिन्छ मात्र नियमित भुक्तानी अवस्था छ।
थप विचार Windows ओपरेटिंग सिस्टम दिनुपर्छ। यसको बलियो बिन्दु, धेरै कार्यक्रम सञ्चालन धेरै यन्त्रहरू, र अरूको लागि समर्थन गर्ने क्षमता छ। तर अपरेटिङ सिस्टम को सबै भन्दा ठूलो drawback ऊर्जा एक ठूलो खपत हुन मानिन्छ। यस्तो प्रणालीको लागि एक शक्तिशाली प्रोसेसर, एक ब्याट्री र राम को एक ठूलो स्टक आवश्यक छ।
त्यहाँ धेरै अन्य कम साधारण र लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टम हो, तर यी सञ्चालन प्रणाली सबै को एक समीक्षा छुट्टै लेखको विषय हो।
राम र ग्राफिक्स कार्ड
तपाईंका प्लेट मा राम को मात्रा ठूलो, अधिक चाँडै र कुशलतापूर्वक काम हुनेछ। यसरी एक उपकरण जस्तै लागत धेरै उच्च हुनेछ।
आफ्नो ट्याब्लेट एक ग्राफिकल सम्पादक काम गर्न खेल लागि बेचिएको छ भने वा, तपाईं एक शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड (- उच्च लागत यसलाई drawback) चयन गर्नुपर्छ। औसत प्रयोगकर्ता मनपरेको औसत गुणस्तर ग्राफिक्स लागि (जस्तै भेद एकदम सस्ता हुनेछ)।
ट्याब्लेट आन्तरिक मेमोरी मात्रा पर्याप्त हुनेछ भने, यो जानकारी को एक ठूलो रकम भण्डारण गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं मूल स्मृति बाह्य भण्डारण को कमी को लागि क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने भूल छैन (राम्रो गर्न, भन्न मेमोरी स्टिक)।
USB फ्लैश ड्राइव को लागि निविष्टियाँ र USB connectors को उपलब्धता ध्यान निश्चित हुनुहोस्। जो मा स्लट एक प्रकारको आवश्यक मेमोरी कार्ड को प्रकार मा निर्भर गर्नेछ।
ब्याट्री को संभावना
ट्याब्लेट खरिद गर्दा, तपाईं ब्याट्री को क्षमता आकलन गर्नु पर्छ। यो कम्प्युटर चलिरहेको छ असर देखि यो, एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो।
ट्याब्लेटको उत्पादन प्रत्येक कम्पनी, यसको प्रोसेसर आत्म-अनुकूलन। आवृत्ति, कोर र आकार टायर संख्या: त्यसैले, तपाईं मुख्य चयन मापदण्ड ध्यान गर्नुपर्छ। डाटा को विभाग को एक विस्तृत अवलोकन - एक विषय, यहाँ मुख्य विशेषताहरु परिभाषित गर्नुपर्छ छ।
2014 को लागि सबै भन्दा राम्रो खेल प्रोसेसर: 1.5 GHz मा Tegra 3-4 कोर सीपीयू; Qualcomm -4कोर 1.5 GHz को प्रोसेसर; एआरएम Cortex A9 -21.2 GHz कोर र एप्पल A6X -2कोर 1.5 GHz।
तपाईं सोध्न भने: "राम्रो छ, जो गोली", समीक्षा लगभग सबै प्रयोगकर्ता नयाँ र शक्तिशाली प्रोसेसर संग ट्याब्लेट पक्षमा छन्।
प्रत्येक पारित वर्ष कम्प्युटर को गति बढ्छ संग सफ्टवेयर सुधार गर्छ। उच्च-टेक बजार मा टाढा पछि आफ्नो predecessors छोड्न कि प्रोसेसर को निरन्तर सुधार र नयाँ मोडेल देखिन्छन्। त्यसैले, जब ट्याब्लेट छनौट आवश्यक प्रोसेसर मोडेल मा ध्यान छ।
म्याट्रिक्स प्रकार र सेन्सर स्क्रिन ट्याब्लेट
यो आईपीएस र तमिलनाडु - प्रदर्शन दुई प्रविधिहरू प्रयोग ट्याब्लेटको को उत्पादन मा। पहिले थप, आधुनिक उन्नत, तर महंगा। दोस्रो केही कमियां (सानो हेर्ने कोण र चमक) छ, तर यसको लागत औसत खरीदार थप किफायती छ।
साथै, एक हल्कासित नलिनुहोस् हुँदैन स्क्रिन रिजोलुसन। आधुनिक HD प्रारूप - ट्याब्लेट कम्प्युटरमा उच्च गुणस्तरको भिडियो पूर्वावलोकन को एक ग्यारेन्टी छ।
आधुनिक ट्याब्लेटको थप सुविधाहरू
वाइफाइ। यो वायरलेस प्रणाली संग एक घर वा सार्वजनिक नेटवर्क जडान गरेर इन्टरनेटमा निःशुल्क पहुँच संभावना छ।
ब्लुटुथ। आधुनिक पीडीए संग मोड्युलहरू ब्लुटुथ 3.0, फाइल चाँडै हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ जो सुसज्जित छन्।
3 जी। यो विकल्प भिडियो बनाउने कहीं र कुनै पनि समयमा कल, तपाईं विश्व नेटवर्क भर इन्टरनेट प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
मल्टिमिडिया, क्यामेरा, मोबाइल फोन समर्थन: सुविधाजनक र उपयोगी सुविधाहरू पनि साधारण छन्।
जो ट्याब्लेट बच्चा लागि किन्न
हाल, विशेष छोराछोरीको प्लेट छन्। उज्ज्वल, उच्च-प्रभाव - तिनीहरूले आफ्नो बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो मित्र हुनेछ। तर तपाईं प्रारम्भिक उच्च प्रविधी गर्न बच्चा संलग्न गर्न चाहे विचार गर्नुपर्छ?
धेरै आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको कम्प्युटरमा अन्य सेट एकदम वैध प्रश्न किन्न निर्णय: "गोली बच्चाहरु को लागि ? एक राम्रो छ" आजको बहु-कार्यात्मक मिनी-कम्प्युटर को पृष्ठभूमि विरुद्ध चयन हराएको गर्न सजिलो छ।
अक्सर, छोराछोरी पनि महंगा खिलौने गर्न लापरवाह छन्, त्यसैले तपाईं एक सस्ती, तर कार्यात्मक मोडेल टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्याब्लेट हुनुपर्छ बच्चा को मुख्य विशेषताहरु के के हुन्?
घटेको, खरोंच र अन्य यांत्रिक क्षति देखि अधिकतम सुरक्षा।
लागत। सस्तो, तर कार्यात्मक मोडेल आफ्नो बच्चाहरु को लागि उत्तम छ।
आकार, प्रयोग गर्न सजिलो।
चित्र स्पष्टता, स्क्रिनमा संकल्प सिधै निर्भर छ।
छोराछोरीको कम्प्युटर एउटा महत्त्वपूर्ण गुण यसको modernity छ।
नयाँ मोडेल भविष्यमा बच्चा गर्न उपयोगी छन् भनेर धेरै सुविधाहरू सुसज्जित छन्। बच्चा अझै पनि बिस्तारै र ध्यानपूर्वक एक महंगा ट्याब्लेट प्रयोग गर्न सक्षम छ भने, यो सम्भावित संग यस्तो खरिद किन्न राम्रो छ। तिनीहरूले पुरानो प्राप्त रूपमा बच्चा आफ्नो मनपर्ने खेलौना outgrow छैन र ट्याब्लेट र स्कूलमा, र प्ले मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, खरीद गर्दा छोराछोरीको मिनी कम्प्युटर प्रश्न निर्णय गर्नुपर्छ: "के सबै भन्दा राम्रो छ ? गेमिङ लागि ट्याब्लेट"
गेमिङ ट्याब्लेट मोडेल निम्न विशेषताहरु छ:
खेल लागि विशेष उच्च गतिको GPU।
एक राम्रो छ, जो एक ट्याबलेट, कसरी किन्ने? आधुनिक उपकरणहरू को विकल्प प्रयोगकर्ता टिप्पणी एकदम विविध छन्। यो सबै सुविधाहरू के तपाईंको पकेट पीसी आशा ग्राहकहरु मा निर्भर गर्दछ। केही, एक एकदम सरल मोडेल सन्तुष्ट सीमित प्राविधिक सक्षमता संग छन्। अर्को एक आधुनिक ट्याबलेट, कार्य को एक किसिम समर्थन सक्षम आवश्यक छ।
सही स्वयं एक विशेष प्रयोगकर्ता लागि आवश्यक विकल्प अधिकतम सूची परिभाषित गर्न आवश्यकता चयन गर्न सक्षम हुन। यो स्थितिमा महत्वपूर्ण भूमिका affordability प्ले।
सबै "फाइदा" र "बुरा" वजन पछि, तपाईं चयन र ट्याब्लेट एक, सभ्य आधुनिक र सुविधाजनक मोडेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। मजा किनमेल छ!
स्लट प्लेट: चोटी-10
पदार्थ को, गुणस्तरीय र मात्रात्मक संरचना बाहिर कसरी पाउन
डिजिटल टिभी, रेडियो र केबल लागि रिसीभर
टिकट को मूल्य गठन एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड - एक इन्धन थप शुल्क